“ အောင်ပင်လယ် မိုးညနေခင်းလေးကတိမ်…………………. “ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » “ အောင်ပင်လယ် မိုးညနေခင်းလေးကတိမ်…………………. “
“ အောင်ပင်လယ် မိုးညနေခင်းလေးကတိမ်…………………. “
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Sep 15, 2012 in Photography, Travel | 17 comments
1 ဦးပွားတံတားပေါ်ကမြင်ရတဲ့ ကြည်နူးစဖွယ်
2 တံတားရဲ့တောင်ဘက်က တိမ်
6စိမ်းမြကောက်းပင် မိူင်းရိပ်ဆင်တောင်တန်း ဖြူလွှလွှတိမ်အဆင် ပြာလွင်သောကောင်းကင်
7 စိမ်းညို့ ညို့ ဖြူပြာလွင်
8 နှစ်သက်စရာ ကြည်နူးစရာ…………………………
10 ဟိုတစ်စ ဒီတစ်စ
11 တိမ်ပြာကောင်းကင် ကရေပြင်ကို ဆေးရောင်ခြယ်
13 နေအလင်းကို ဖုံးကွယ်ထားတဲ့တိမ်
14 တိမ်မိူင်းညိုမှောင် လွမ်းယောင်ယောင်
15 စိမ်းစို စိမ်းမှောင် ဖြူယောင်ပြာလဲ့ သဘာဝပန်းချီ
16 ကျနော်နှစ်သက်ခဲ့တဲ့ တိမ်မောင်နှံ
1-9-2012 နေ့ နေ့လည်ခင်းလောက်မှာ တက်သိမ်းအင်းက တိမ်တွေကို လက်ဆော့အပြီးမှာ
ဦးပွားဘုရားနဲ့ တိမ်အဆင် ကို လှမ်းလို့လက်ဆော့၊
တံတားရဲ့တောင်ဘက်ခြမ်းကိုလက်ဆော့ အပြီးမှာ တံခွန်တိုင်ဘက်ကိုသွားဘို့ စိတ်ကူးလိုက်ပါတယ်။
အဲဒီအချိန်ရွာသားကိုဖိုးထောင်ကို သတိရလို့ လမ်းဘေးမှာဆိုင်ကယ်ရပ်လို့ ဖုန်းဆက်တော့
ဘယ်နားမှာလဲလုိ့ မေးတေ့ာ သံယောဇဉ်မြန်မာပင်ကျရည် ဆိုင်မှာရောက်နေပါသတဲ့။
မနက်က တင်အဲဒီဘက်က ပြန်လာခဲ့တာဆိုတော့ သိပ်တော့မသွားချင်။
“လေးပေါက်ရာ တိမ်တွေအရမ်းကိုလှနေတာ ကျနော်လဲ နေအကျဓါတ်ပုံရိုက်ချင်လို့စောင့်နေတာ”ဆိုတဲ့
အသံလဲကြားရော တံခွန်တိုင်ဘက်ကိုသွားဘို့ဦးတည်ထားတာကို သိပ္ပံလမ်းဘက်ပြောင်းလိုက်ပါတယ်။
အဲဒီနေ့ နေလည်ခင်းက နေအတော်ပူပါတယ်။
ဒါပေမယ် တိမ်တွေလှတယ် ဆိုတဲ့စကားလေးက အပူတွေကိုလျော့ပါးသွားစေသလိုပါဘဲ.။
ကျနော်ရောက်နေတဲ့နေရာနဲ့ ကိုဖိုးထောင်ရှိတဲ့နေရာ လေးမိုင်လောက်တော့ဝေးပါတယ်။
အဲဒါနဲ့သိပ္ပံလမ်းအတိုင်းအရှေ့တက် အောင်ပင်လယ်ကန်ဘောင်ရိုးရောက်တော့ မြောက်ဘက်ကိုဦးတည်လို့
ရေတံခွန်တောင်သွားတဲ့ လမ်းကို စီးတော်ဆိုင်ကယ်နဲ့ အပြင်းနှင်ခဲ့ပါတယ်.။
မနက်ရောက်တုန်းက မရိုက်ခဲ့ရတဲ့နေရာလေးတွေကို ပြန်ရိုက်ဘို့နေရာလေးတွေကိုလဲပြန်စဉ်းစားရင်းပေါ့။
ဒါနဲ့ နာရီဝက်သာသာလောက်မောင်းအပြီးမှာ အောင်ပင်လယ်ရင်ခွင်အစကိုရောက်။
ဘဲတွေမွေးထားတဲ့နားက ရေကန်ထဲကို တိမ်ရေသောက်ဆင်းနေတာတွေကိုရိုက်။
ဒါနဲ့ သိပ်မကြာခင် ကိုဖိုးထောင်ရှိတဲ့နေရာကိုရောက်လာပါတယ်။
ကျနော်အတွက် ငေးမ၀ ကြည့်မ၀။
သိပ်မကြာခင်လေးမှာ မိုးရိပ်ဆင်နေတဲ့တိမ်ထုထဲကို နေမင်းက ခဏလေးအပုန်း
လှပသော တိမ်အစုလေးကိုရခဲ့တာ စိတ်ထဲမှာကျေနပ်မိပါတယ်။
ကဲ ကြည့်လိုက်ပါအုံး ကျနော်ပြောတာ အပိုတွေမ ဟုတ်ဘူးဆိုတာကို သက်သေပြချင်လို့ပါ။
အတော် အေးချမ်းမယ့် နေရာလေးလို့
ဟို .. စေတီလေးတွေနဲ့ နေရာလေးမှာ
ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေရော ရှိသလား ..
ဒါမှ မဟုတ် ဘုရားချည်းပဲလား ..
No.6 ပုံကို Desktop ပုံအနေနဲ့သုံးချင်လို့ ကူးသွားပါတယ်။
ကိုပေါက်ရေ ကင်မလာအသစ် ဝယ်ပြီး ပြီလားဗျို့ 
အခုပို့ စ်ထဲက လယ်ကွင်းပုံတွေ ကြည့်ရတာ မျက်စိအေး စိတ်အေးရတယ်ဗျား
ရွှေနန်းတော်ရှေ့ ရတနာပုံပြည်ဝယ် ဇောင်းကလောကန်နဲ့ နန္ဒာကန်လယ် မွှေးထုံပျံ့ကြွယ် ပန်းရနံ့သွယ်သွယ်၊ တောင်သမန် ရေအင်း ငွေအဆင်းသို့နှယ်။
ရှေးကဆိုတယ် ဗဟိုနယ် အိုဘယ်ဌာန ထိုကာလ၀ယ် ထွန်းပ၀န်းကျယ် လွမ်းဖွယ် အံ့ဖွယ် သြော် ပန်းရနံ့သွယ်သွယ်၊ အောင်ပင်လယ် အောင်ပင်လယ် အောင်ပင်လယ် အောင်ပင်လယ် အောင်ပင်လယ် အောင်ပင်လယ်။ တကယ့်တောအစစ်ကဲ့သို့ ခုတော့ လယ်ကောဖြစ်လို့မို့ ကောင်းဖို့ရွယ်သော စံနစ်ကို အထူးသဖြင့် မျှော်မိတယ်။
(ကြာစိမ်းကြာပြာ ပွင့်နီများ လှုပ်ရှားကာရယ် များစွာကွယ်) ၂ ။ လေယူရာကို ကြိုင်လှိုင်သွေးလို့ မွှေးကြည်တယ် ရှေးမီတယ်။ လူအိုလူမင်း ပြောခြင်းလက္ခဏာ ဟင်္သာမောင်နှံရယ် ၀ဲတယ် ၀ဲတယ်။ အောင်ပင်လယ် အောင်ပင်လယ် အောင်ပင်လယ် အောင်ပင်လယ် အောင်ပင်လယ် အောင်ပင်လယ်။ တကယ့်တာအစစ်ကဲ့သို့ ခုတော့ လယ်ကောဖြစ်လို့မို့ ကောင်းဖို့ရွယ်သော စံနစ်ကို အထူးသဖြင့် မျှော်မိတယ်။
သိသလောက်သာ မှတ်ကြဖွယ်။ ကမ္ဗည်းကျောက်စာ ဖတ်ရမယ်။ ရွှေမန္တလေးတောင် ဖွေးဖွေးရောင်ရွှေ တောင်ခြေ အကွေ့အတက် အရှေ့ဘက်မှာကွယ် ဂူငယ်တစ်ခုနဲ့ အများရှုမြင်နိုင်တယ်။ တကယ် တကယ် တကယ်တဲ့။ (မင်းရှင်စော မျှောသည့်ဖောင်ငယ် လေးကန်စလုံး သိမ်းကျုံးတည်တော်မူတယ်) ၂။ အဲဒါတွေကို စီခြယ် နန်းတော်ရှေ့ကဆရာတင်ရယ် ကိုမြို့မကိုပြောပြ သောတနားဝယ် ကြားဖွယ်မှတ်ဖွယ်။ ယထာဘူတကို ကြံဆို မှန်မှန်ကန်ကန် ဓါတ်သံဖွင့်ပါကြောင်း နဲ့ အောင်ပင်လယ် အောင်ပင်လယ် အောင်ပင်လယ် အောင်ပင်လယ် အောင်ပင်လယ် အောင်ပင်လယ်။ တကယ့်တောအစစ်ကဲ့သို့ ခုတော့ လယ်ကောဖြစ်လို့မို့ ကောင်းဖို့ရွယ်သော စံနစ်ကို အထူးသဖြင့် မျှော်မိတယ်။
ပိုစ်နဲ့သိပ်တော့ မဆိုင်လှသလို..သီချင်းထဲကလို ကောနေတဲ့လယ်တောတွေ မဟုတ်ပေမဲ့ အောင်ပင်လယ်ဆိုသမို့ နန်းတော်ရှေ့ဆရာတင်ရဲ့ အောင်ပင်လယ်သီချင်းကိုသတိရသွားလို့..သီချင်းစာသားလေးနဲ့အတူ ဆြာပေါက်ရဲ့ တိမ်တွေကို ခံစားသွားပါတယ်ရှင်…
(ကြာစိမ်းကြာပြာ ပွင့်နီများ လှုပ်ရှားကာရယ် များစွာကွယ်) ၂ ။ လေယူရာကို ကြိုင်လှိုင်သွေးလို့ မွှေးကြည်တယ် ဆိုတဲ့အပိုဒ်လေးကိုနားထဲကြားမိတော့ ကြာပင်အိုင်အလွမ်းဆိုပြိးတော့ ပိုစ်တောင်တင်မိပါသေးတယ်။
ဂျူးမ ကြိုက်နှစ်သက်သောပုံများအား ကူးယူခွင့်ပြုပါ …..
အဲ့ လိုတိမ်အဆင်တွေ ခုချိန်မှာ မြင်ရခဲ တယ်အစ်ကိုရေ
တခါတလေ အစ်ကိုတို့ ကိုအားကျတယ်။ကျနော်လည်းဘယ်အချိန်ကျမှ
ဝါသနာပါတာတွေလုပ်နိုင်ပါ့ မလဲလို့ 
ဒါတတိယအကြိမ်မန်းတာပဲ။တင်လိုက်၊ Problem loading ပြလိုက်။
အသစ်ဟုတ်ဘူး မောင်ရှမ်းရ မင်းနဲ့တွေ့တုံးက ပေါက်စနလေးဘဲမောင်မောင်ရှမ်းရေ့